दशैंमा सावधानी नअपनाए लाग्न सक्छ ‘दीर्घरोग’
आज : मंगलबार ९ कार्तिक २०७८ / Tuesday, October 26,2021
२०७८ असोज २७ बुधबार १२:३०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व दशैंमा प्रायस् सबैले मासु खाने गरेका छन् । नहुनेले पनि ऋणपान गरेरै भए पनि दशैंमा मासु खानैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर यस्तो पर्वमा मासु कति, कसरी र कस्तो खाने भन्ने सन्दर्भमा हामी खासै सचेत छैनौं ।
गलत तरिकाले भण्डारण गरिएका र बासी मासु खाँदा ज्यान सक्ने स्वाथ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । मासुसहित चिल्लो पदार्थ खाँदा र मदिरा पिउँदा धेरैको स्वास्थ्य बिग्रिने हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार दशैंका बेला खानपिनमा ध्यान नदिँदा स्वस्थ मानिस पनि अस्पताल पुग्छन् । त्यसैले खानपिनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
दशैंका बेला उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । अस्वास्थ्यकर मासुका कारण तत्कालै टाइफाइड, झाडापखाला, आउँ, पेट दुख्ने र फुल्ने समस्या पनि हुन्छ । दशैंका बेला एकै पटकमा धेरै मासु खाने प्रबृत्ति छ । जुन स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । यस्तै, कोक, फेन्टा र अन्य जुसभन्दा सफा पानी र हरियो तरकारीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । मासुको मात्र भर पर्नु हुँदैन ।
अनियन्त्रित खानपानले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा भई मधुमेहसहित अन्य रोगलाई बढावा दिने भएकाले मासु खाँदा ध्यान दिनुपर्छ । रातो मासुमा स्याचुरेटेड फ्याट ९स्वास्थ्यका लागि हानिकारक चिल्लो० हुन्छ । यसले शरीरमा बोसोको मात्रा बढाउँछ र उक्त बोसो रगतको नशा तथा धमनीमा गएर जम्न सक्छ । यसले कोलस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप एवं मुटुको रोग निम्त्याउछ ।
दसैंमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि नेपाली पोलेको मासु, सेकुवा आदि बढी खान्छन् । यस्ता मासुमा कार्सिनोजेनिक भनिने तत्व समावेश हुन्छ जसले पेट र आन्द्रासम्बन्धी क्यान्सर हुने सम्भावना बढाउँछ ।
यस्तो चाडबाडमा मासु खानै नहुने भन्ने होइन, तर कस्तो मासु खाने रु कति र कसरी खाने रु भन्नेले महत्वपूर्ण हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार एक छाकमा तीन–चार टुक्रा मात्रै मासु खानुपर्छ ।
मिर्गौला रोगीले के खाने ?
मिर्गौला रोगीले माछा र सेतो मासु खाँदा राम्रो हुने बताइएको छ । तर बिर्सेर पनि –मुटु, कलेजो, मिर्गौला, आँखा, रगत खान नहुने बताइएको छ ।
मासुका लागि उपयुक्त पशु तथा पन्छीको उल्लिखित अंग नखाँदा स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ । विषाक्त रसायनले मानिसको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन । रोगी मानिसले त्यस्ता रसायन भएको मासु खाँदा रोगीमाथि रोगी हुन्छन् ।
माछा मासु कति खाने ?
सेतो मासु बढीमा ५ टुक्रा ।
माछा २ देखि ३ टुक्रा ।
अन्डा १ देखि २ वटासम्म ।
रोतो मासु २ देखि ३ टुक्रा ।
घाम र धूवाँमा सुकाएको मासु नखाने ।
सामान्य फ्रिजमा राखिएको मासु दुई/तीनपछि नखाने ।
मासु पकाएर धेरै समय फ्रिजमा राख्दा पनि ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन सक्छ । भण्डारणको उचित वातावरण नमिल्दा पनि कतिपय अवस्थामा मासु खानयोग्य नहुने चिकित्सकको भनाइ छ । चाडपर्वका नाममा जथाभावी खाएर अस्वस्थ हुनु स्वास्थ्य बाधा मात्र होइन आर्थिक क्षतिका साथै परिवारका सदस्यका लागि हैरानीसमेत हो । त्यसैले मासुजन्य खानेकुरा खाँदा साबधानी अपनाऊ । source : news24nepal.tv
नेता कंडेलले एमाले गैँडाकोटको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
नेकपा एमाले गँैडाकोटको आज वडावडाबाट प्रतिनिधि छनोट हुँदै
नवलपुरमा गैँडाकोट बाहेक अन्य स्थानीय तहमा आज नेकपा एमालेको अधिवेशन हुँदै
नवलपुरमा गैँडाकोट बाहेक अन्य स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको अधिवेशन हुँदै
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा दुर्व्यवहार भोग्नु परेको किशोरीहरुको गुनासो
नवलपुरमा आज थप ७ जनामा कोभिड १९ पुष्टी
देवचुली फारमचोकबाट जुवातास खेल्ने पाँच जना पक्राउ